EVY's Kitchen: Coffee Liquor Cake/ ကော်ဖီအရက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ကိတ်
ဒီတစ်ခါတော့ အရက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကိတ်ကလေးတွေကို တင်ပါ့မယ်။ အတိအကျဆိုရင် ကော်ဖီအရက်ပေါ့။ တလောက Ann ရဲ့ ဘလော့ကိုသွားကြည့်ပြီး သူ့မုန့်လေးတွေကိုချစ်တာနဲ့ သူ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ချင်တဲ့ ရောဂါတက်တော့တာပဲ။ အညွှန်းတွေကလဲ ခပ်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ ဒီမုန့်ကို ငါရအောင်လုပ်မယ်လို့ အားခဲပြီး အဓိကကျတဲ့ Ingredient အသဲအသန်ရှာတော့ပါပဲ။ အဲဒီမှာ ပါတဲ့ အဓိကမင်းသားက coffee liquor ။ ဈေးပတ်ရင် အရက်တန်းကို မိန်းမတန်မယ့် အသည်းအသန်ကြည့်လဲကြည့်ရဲ့ ။ ဒါပေမယ့်လဲမတွေ့ပြန်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူ့ကိုပဲမေးလိုက်တော့ cold storage မှာရှိပါတယ်တဲ့ ဈေးတော့နဲနဲကြီးတယ်လို့ ဆိုလာ
တယ်။ သူ့ဆီကသိရရခြင်း အလုပ်အပြီး ဆိုင်ကိုပြေးတော့တာပဲ။ တွေ့လိုက်တော့ $S 70တဲ့။ သုံးရမှာက ၃ ၊၄ ဇွန်းသာသာ ပေးရမယ့်ပိုက်ဆံက ၇၀ဆိုတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲ တပ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ တခြားအကြံကလည်း ရှိသေးတာကိုး။ ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ကလူကြီးက ဂျပန်ကို သင်တန်းသွားလို့ ပြန်လာခါနီးတစ်လ အလိုလောက်ဆိုတော့ လေဆိပ်မှာဝယ်ရင် သက်သာနိုင်တယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုရအောင်ဝယ်ခဲ့ပေးပါဆိုပြီး မှာလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာ သူ့ကိုသွားကြိုရင်း အဲဒီပုလင်းပါလာတာကို မြင်လိုက်တော့ ၀မ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ ဈေးကို မြင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်နေတာ။ ဈေးက S$ 27...ပါ။ ဟုတ်ပ့ါ အဲသလောက်ကိုကွာတာ။
လိုချင်တာရတော့ မုန့်ဖုတ်ခြင်းအလုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါတော့တယ်။ Mini Muffin ခွက်လေးတွေကလည်း ရှိတော့ အသင့်ပါပဲ။ လွယ်ကလည်းလွယ်။ ရှိသမျှ ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောမွှေပြီး အာဗင်ထဲထည့်ရင် မုန့်ဖြစ်ပြီ။ အရသာက ကော်ဖီနဲ့ အရက်နဲ့ရောထားတာကြောင့် ခါးသက်သက် ကော်ဖီအရသာမျိုးလေးထွက်ပါတယ်။ မုန့်အသေးလေး ၁၂ခု ထွက်ပါတယ်။ မုန့်လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ညနေ ၄နာရီခွဲ ကော်ဖီသောက်ချိန်အမီပေါ့နော်။ အဲဒါ အိမ်ကလူကြီးကို မြည်းခိုင်းတော့ သူကသိပ်အကြိုက်ကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ ကျွန်မကလည်း ဩော်ဟုတ်လားပေါ့ ခဏနေမှ မြည်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပုံတွေ edit လုပ်ဖို့အခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ မိနစ်၂၀လောက်ကြာပြီး အိမ်ရှေ့ထွက်လိုက်တော့ မုန့်တွေထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်မှာ ၄ ခုလား၊ ၅ ခုလားပဲကျန်တော့တယ်။ မြတ်စွာဘုရား မုန့်တွေဘယ်ရောက်ကုန်တုန်းဆိုတော့ ကျေးဇူးရှင်က ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ တစ်ခါစားတစ်လုတ် နဲ့ မြည်းလိုက်တာ အဲလောက်ပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။ သူသိပ်မကြိုက်တာက အဲသလို :D. မုန့်လေးတွေကလဲ သေးသေးလေးတွေဆိုတော့ တစ်လုတ်စာလေးတွေနဲ့ ဟုတ်နေတာ။ အဲဒါသူနဲ့ အတင်းလုစားပြီး ညနေ ၅ နာရီမှာပဲ မုန့်တဗန်းလုံးက တက်တက်ပြောင်ပါတော့တယ်။
ကဲစိတ်ဝင်စားရင်စမ်းကြည့်ကြနော်။ တကယ်လို့ coffee liquor ကိုမရခဲ့ရင် Rum နဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ အရက်ကြိုက်တတ်သော အိမ်ရှင်များသတိပြုပါ။ ရမ်ပုလင်းတွေဘာတွေလုံအောင်ဖွက်ကြပါ။ မဟုတ်လို့ မုန့်ထဲရောက်ကုန်ရင် တာဝန်မယူပါ :D
1/2 cup Icing sugar ~ 40g
1/4 cup Almond meal ~ 30g
1/4 cup Kahlua coffee liquour
အာဗင်ကို ၁၈၀ ဒီဂရီ အပူပေးထားလိုက်ပါ။ ကော်ဖီအရက်ကလွဲပြီး ကျန်တာအားလုံးကို လက်နဲ့ပဲရောမွှေထားပြီး ဆီသုတ်ထားတဲ့ မုန့်ဖုတ်ခွက်ကလေးတွေထဲမှာ ထည့်ပါ။ ပြီးရင် မိနစ် ၂၀-၂၅ မိနစ်လောက်ဖုတ်ပြီး အာဗင်ပေါ်က ချချခြင်း ကော်ဖီအရက်ကိုမုန့်လေးတွေပေါ်လောင်းပေးပါ။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲလောက်စီပေါ့။ နဲနဲကြီးတဲ့ ခွက်နဲ့လုပ်ရင်ပိုလောင်းပါ။ လုံးဝအေးသွားပြီဆိုရင် icing sugar ဖြူးပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
I'd like to say thank you Ann for sharing Donna hay's recipe. I find her recipes are very easy to follow too..
စမ်းစမ်းပြားပြားမုန့် လေးမို့အရမ်းကြိုက်တယ် ..
Mmmm... look very lovely. I can't read the wordings but I'm sure you enjoyed this cake.
အားပါးတရကိုရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းဖို့ ဘယ်သွားပြီ။
ဒါဆို သောက်စရာမလိုဘဲ မူးနေမလားမသိဘူး။
ဒီကလည်း ကြိုက်က ကြိုက်သနဲ့...
ရီဝေဝေလေးဆို သိပ်ကောင်း.. တစ်ယောက်တည်း အကုန်စားပစ်မှာ သေချာတယ်။း)